San Htun's Diary: Blessing in disguise !
Blessing in disguise !
အခက်အခဲတွေနဲ.ကြုံပြီ: စိတ်ဓာတ်တွေ လုံ:ဝကျဆုံ:ကာ ငါတော. သွားပြီလို့တောင် တွေးမိတယ်. အချိန်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလို အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လို ကျော်ဖြတ်ရမှာပါလိမ့်။ အားရပါးရ ငိုပြီ:ချိန်မှာ လမ်:လျှောက်ထွက်လိုက်ပါ။
သာယာလှတဲ.ကျေးငှက်သံတွေ၊ တသွင်သွင်စီးဆင်းနေတဲ. စမ်:ချောင်းလေ:တွေ၊ စိမ်:လန်:တဲ. သစ်ပင်တွေ၊ နွေဦးမှာ အစွမ်:ကုန် ဖူးပွင့်နေတဲ. ပန်:ပင်တွေ၊ တိမ်ရောင်စုံ တောက်နေတဲ. ကောင်းကင်နဲ. လောကကြီ:ကတော. လှပနေဆဲ။ ကိုယ်အပူနဲ. ကိုယ်မို့ လောကကြီ: လှပနေတာကို မမြင်မိတာပါ။ စိတ်ပင်ပန်:စေတဲ. အရာတွေနဲ. တရက် နှစ်ရက်လောက် အဝေးမှာ နေပြီ: စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် အနားယူလိုက်ပါ။ ပြီ:မှ ဘာဆက်လုပ်ရမယ် ဆိုတာ အေးအေးဆေးဆေး ဆုံ:ဖြတ်လိုက်ပါ။
ကိုယ် ဘယ်လို ရှုံးနိမ့်နေမစေ အမြဲ အစွမ်:ကုန် အားထုတ်တယ်လို့ ကိုယ်ကို ယုံပြီ: ကိုယ်ဖက်မှာ ရှိနေတတ်တဲ. မိသာ:စု၊ အမြဲ အားပေ:နေတဲ. သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်:တွေရှိနေတာက ကံကောင်းခြင်းပါ။ အရှုံးဆိုတာ မကြုံဖူးတဲ. သူအတွက်တော. ပထမဆုံ:အရှုံးဆိုတာ တော်တော်ကို ခံရခက်ပါတယ်။ လောကမှာ မရှုံးနိမ့်ဖူးတဲ.သူ၊ မလဲကျဖူးတဲ.သူ မရှိပါဘူး။ လဲကျရင် ဘယ်လို ပြန်ထမလဲပေါ်ပဲ မူတည်ပါတယ်။ ငိုပြီ: ညည်းညူနေလို့ကတော. ပြန်မတ်တပ်ရပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှုံးနိမ့်ရတာ ရှက်စရာမဟုတ်ပါ။ ထပ်ပြီ: မကြိုးစားဘဲ လက်လျှော.တာကမှ ရှက်စရာပါ။ အရှုံးထဲက သင်ခန်:စာ ယူပြီ: ဘယ်လို အောင်မြင်အောင် ထပ်ကြိုးစားရမလဲ သိလာပါတယ်။ နောက်ကိုတလှမ်:ဆုတ်တာဟာ ရှေ့တိုးဖို. အားယူတာပါ။
ဖေမြင့်ရဲ. "မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာပြီလား" စာအုပ်က ကြိုက်တဲ. စာသားလေးတွေ ကူးယူဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
"သေသေချာချာကြည့်သမီး၊ မြို.လယ်ကွက်လပ်ကိုရောက်အောင် သွားနိုင်တဲ.လမ်:ဟာ တစ်လမ်းတည်: မဟုတ်ဘူး၊ အများကြီ: ရှိတယ်။ လူ့ဘဝမှာလည်: ထိုနည်းလည်:ကောင်းပဲ၊ သမီးရည်မှန်:ထားတဲ. ပန်:တိုင်ကို ဒီလမ်:က သွားလို့မရရင် နောက်တစ်လမ်:က ကွေ့သွားလို့ ရနိုင်တယ်။"
"ဘယ်လောက်ဝေးဝေးကြီ: သွားရဦးမယ်ဆိုတာ မစဉ်းစားနဲ.၊ရှေ့တစ်မိုင်အတွက်ကိုပဲ စဉ်:စား၊ အဲဒါဆို မင်:တို. ရောက်လိမ့်မယ်လို့ ငါယုံကြည်တယ်။"
"ရှေ့ဆက်တိုးရ ခက်နေတယ်ဆိုတာ တစ်ခုတည်:နဲ.တော. နောက်ဆုတ်လို့ မဖြစ်ဘူး။"
"ဘဝမှာ ကြုံရတဲ. ခလုတ်ကန်သင်းတွေကို ကိုယ်.ဘဝ တိုးတက်အောင် မြှင့် တင်ပေးမယ်. လှေကားထစ်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ရမယ် သား၊ ခလုတ်တိုက်မိတဲ. ကျောက်တုံးကို ခြေနင်းတုံးအဖြစ် အသုံးပြုတတ်ရမယ်။"
"ဂီတတစ်ခုတည်:မှ မဟုတ်ဘူး၊ လုပ်ငန်:မှန်သမျှ ဒီအတိုင်းပဲ၊ တချို.အပိုင်းတွေ လွယ်တယ်၊ တချို.အပိုင်းတွေက ခက်တယ်။ ဘယ်လုပ်ငန်:မှာမဆို တကယ်တမ်: အောင်မြင်ချင်ရင် ခက်တဲ. အပိုင်းတွေလည်: မလွှဲမရှောင်သာ လေ့ကျင့်ရလိမ့်မယ်။"
"ဘယ်အရာပဲဖြစ်စေ၊ ဒီဟာကတော. ကိုယ်လုပ်သင်.လုပ်ထိုက်တဲ. အလုပ်ပဲလို့ သိထားပြီ:ပြီဆိုရင် မဆိုင်းမတွ လုပ်ရမှာပေါ့ သား။"
"ကိုယ် တကယ်လုပ်မကြည့်သေးပဲနဲ. ကျွန်တောလုပ်မရဘူးလို့ ဘယ်တော.မှ မပြောနဲ.။"
ကျောက်တုံးကျောက်ခဲနှင့် တည်ဆောက်ထားသည်. နံရံတံတိုင်းဟူသည်လည်: တစ်ချိန်မှာ ပြိုလဲသွားနိုင်သည်။
"အောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိက သော.ချက်ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အလျင်စလို မချမိအောင် ထိန်:နိုင်ခြင်းပဲ သား၊ပြသာနာတစ်ခုကြုံရင် ပထမဆုံ: သေသေချာချာ စဉ်းစား၊ ပြီ:တော.မှ စိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ. ဆုံ:ဖြတ်ချက်ချ။
"ဖြစ်ရမယ်လို့ စွဲစွဲမြဲမြဲ ယုံကြည်မယ်၊ ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ.ပွဲကို ကိုယ်ဝင်ပြိုင်ဖို. ဇွဲနပဲလည်: ရှိမယ်ဆိုရင် အောင်ပွဲဆိုတာ ပြေးမလွတ်ဘူး။"
"သား မင်းတကယ် ကြိုးစားရဲ.လား။"
"တကယ် သေသေချာချာ ကြိုးစားတာ အမှန်နော်။"
"ဒါဆို မပူနဲ. သား၊ မင်းတကယ်ကြိုးစားနေတာ မှန်ရင်မအောင်မြင်စရာ မရှိဘူး၊ အောင်မြင်လိမ့်မယ်၊ မကြိုးစားတော.ဘူး ဆိုမှတာ တကယ်ရှုံးသွားတာ။"
တခါတလေမှာ ကံမကောင်းဘူးလို့ ထင်လိုက်ရတယ်. အရာတွေက ကံကောင်းဖို. ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ကံဆိုတာ အမြဲမကောင်းတတ်သလို မမြဲလည်: မဆိုးတတ်ပါဘူး။ ကံဆိုးနေတယ်လို့ ထင်လိုက်တဲ.အချိန် တွေးလိုက်ပါ နောင် ကံကောင်းတော.မယ်လို့။
Complaint girl !
Culture Shock ! _ 2
နာနာလေးကစ်တယ်. နာဂစ် _ ၃
Pitfall - ဂျောက်ပေါက်
နာနာလေးကစ်တယ်. နာဂစ် _ ၂
တောဝက်ကလေးတွေ ရှေ့လမှာ ကိုးရက်ကြာ သာသနာ့ဘောင်ဝင်မယ်